Afarta kulan ee xiisaha badan ee Android | Androidsis
Ciyaaraha xiisaha badan ayaa soo jiray muddo dheer. Maalintoodii waxay ka soo muuqdeen kombuyuutarrada iyo kombiyuutarada. Laakiin, sida ciyaaraha badankood ee suuqa, iyaguna way dhammaadeen imanaya qalabka Android. Marka waxaan horeyba ugu raaxeysan karnaa si toos ah taleefankeena casriga ah. Xulitaankan ayaa inbadan kordhiyay waqtiga.
Sidaas isticmaalayaasha telefoonka Android leeyihiin iyo aad u badan oo kulan biimayn ay ka soo xushaan. Markaas ayaannu kaaga tagnay xul ah cinwaanada ugu xiisaha badan ee aad ka heli karto.
Dhammaantood waxay aad ugu kalsoon yihiin fikradda hal-abuurka sawirka, laakiin isla markaa aad ayey uga duwan yihiin midba midka kale. Marka dhammaan isticmaaleyaashu waxay heli karaan wax ay aad u jecel yihiin ama waxay uga heli karaan xiiso badan. Tani waa xulkeenna oo leh riwaayadaha garaafyada ugu fiican ee Android.
1 Age The Silent
2 Qolka Sirta Layton Brothers
Age The Silent
Waxaan ku bilaabaynaa kulankaan taas waxay u taagan tahay haysashada shaxanka aad u yar, laakiin taasi sidoo kale waxay u taagan tahay jilitaankeeda fudud. Ma soo bandhigeyso wax dhibaato ah oo la xiriirta dareenkan, marka waa wax aad u fudud in lagu ciyaaro. Kulankaan waxaan la ciyaareynaa Joe. Waa wax walba oo ku saabsan nadiifiyaha kaasoo u shaqeynayay Archo dhowr sano hadda. Wax walba waa caadi ilaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ogaadaa barkad dhiig ah oo ku jirta sheybaarka oo nadiifiya. Tani waxay keenaysaa in wax walba isbeddelaan xag-jir. Waa ciyaar madadaalo leh hawl fudud.
La soo degsashada cayaartan xiisaha leh ee loogu talagalay Android waa bilaash. In kasta oo aan ka helno wax iibsi gudaha ah.
Developer: Guri ku gubanaya
Qolka Sirta Layton Brothers
Marka labaad, waxaan helnaa magac hubaal u muuqda mid dad badani yaqaan. Maaddaama ay tahay taxane ah ciyaaraha ugu caansan adduunka Android. Waxaan wajaheynaa qeybtii ugu dambeysay ee ciyaarta. Qaabka ay ciyaartu u shaqeyso waxbadan iskama badalin Waa inaan ka fiirso tilmaamaha ay na siinayaan oo aad ugu kuur galaya cidda uu yahay gacan ku dhiigluhu. Xaaladdan oo kale halyeeyadu waa Alfendi, oo ah wiil uu dhalay Professor Layton. Ku darso baarayaal cusub Lucy Baker. Waxay ku saabsan tahay a ciyaarta ugu xiisaha iyo xiisaha badan. Intaa waxaa dheer, muusiggu sidoo kale waa asal wuxuuna caawiyaa ciyaarta.
La degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. In kastoo, sidii ciyaartii hore, waxaan ka helaynaa wax ku iibsasho gudaha ah.
LAYTON WALAALAYAAL Qolka Qarsoodiga ah
Mar saddexaad, waxaan la kulannaa ciyaar taas ayaa helay abaalmarino kala duwan tan iyo markii la bilaabay. Oo kulligoodna way istaahileen, maxaa yeelay waa sheeko asal ah. Waxa intaa u dheer in sifiican loo qabtay oo xoogaa la haysto naqshadeynta cajiibka ah. Marka waa wax lagu farxo in lagu ciyaaro dareenkaas. Waxaan ku jirnaa adduunyo-apocalyptic adduunka. Josef waa robot ay tahay inuu badbaadiyo saaxiibtiis Berta. Aroosadda waxaa qafaashay Ikhwaanka Madow Madow. Waa inaan tagnaa xalinta xujooyinka iyo tilmaamo kala duwan in aan kulanno si aan horay ugu socono oo aan u helno aroosadda. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah wadahadal kuma laha ciyaarta, wax walba waa muuqaal.
Soo degsashada ciyaartan asalka ah ee loogu talagalay Android waxay leedahay kharash dhan 4,99 euro. In kastoo, gudaha gudaheeda aysan ka jirin wax iibsi ama xayeysiis nooc kasta ha ahaadee.
Kulankaan ugu dambeeya ee liiska wuxuu ka yimid isla abuurayaashii sidii cinwaankii hore. Marka tani waxay keenaysaa filashooyinka inay aad u sarreeyaan. Tani waxay u badan tahay inuu yahay ciyaartiisa hamiga badan iyo sidoo kale midka ugu sawirada fiican. Maaddaama ay u egtahay inay ka tirsan yihiin filim, shaqo weyn ayey ka qabteen arrintaas. Waa inaan caawi gnome doonaya inuu noqdo cirbixiyeen u safro adduunyo kale raadinaya jawaabo kala duwan. Ciyaar asal ah oo sheeko xaqiiqa ah kugu dhaceysa.
Soo degsashada ciyaartan asalka ah ee loogu talagalay Android waxay leedahay kharash dhan 4,99 euro. Laakiin, gudaheeda ma jiraan wax iibsi ama xayeysiis noocuu doono ha ahaadee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha xiisaha leh ee ugu wanaagsan Android
Skype waxay fidisaa taageerada Android 4.0.3 iyo kadib